Ihe niile gbasara Trenbolone Enanthate ntụ ntụ | AASraw
Ihe niile gbasara Trenbolone Enanthate ntụ ntụ
/blog/gallery/Ihe niile gbasara Trenbolone Enanthate ntụ ntụ
Ihe na 02 / 20 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ị na-eche na ị na-etinye ụfọdụ steroid dị ike n'ime ọchịchị gị? Ọfọn, Trenbolone enanthate ntụ ntụ nwere ike ịbụ ụzọ na-aga. Lelee akụkụ dị egwu nke ọgwụ ọjọọ, uru ya, mmetụta ndị ọzọ, na otu esi eme nzụta.
Ná mmalite, Trenbolone bụ ọgwụgwọ ọgwụ maka ọgwụ maka ọgwụgwọ uru anụ ahụ na ehi. O buru ụzọ malite n'etiti 60 site na ụlọ ọrụ Germany, Hoechst-Roussel. Ndị na-emepụta ihe a na-edepụta ngwaahịa ha, Finajet. N'otu oge ahụ, Trenbolone enanthate ntụ ntụ bụ isiokwu nke nnyocha na Los Angeles na Mahadum California.
Nke a Tren Ace Germany na-emepụta ihe maka oge ruo mgbe ịkwụsị ya na 80s. Afọ ole na ole ka e mesịrị, ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na France jupụtara na tebụl trenbolone hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) n'okpuru aha aha, Negma. N'ụzọ dị mwute, a kwadoro nke a na 1997.
N'ikpeazụ, ụbụrụ Trenbolone pụtara na njedebe dị ka ngwaahịa nwere onwe ya na 2004 nwere akara label, trenabol. Ụlọ ọrụ na-agba ịnyịnya na United States rụrụ steroid dị ka ụlọ nyocha ụlọ. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-aga ahịa na 2006, akara ahụ ka dị na ahịa ojii.
Ọ bụ ezie na Tren A okpukpu abụọ dịka ọgwụ na ọgwụ vet, Tren E na Parabolan bụ n'ụzọ zuru ezu maka iji mmadụ eme ihe.
Kedu ihe bụ Trenbolone Enanthate ntụ ntụ?
Trenbolone enanthate bụ onyinye mmepụta ihe na CAS ọ bụghị 10161-35-8. Ọ bụ ihe onwunwe, nke gosipụtara maapụ anabolic na androgenic. Tren E ntụ bụ C17β enanthate ester, ọ na-esite na nandrolone (19-nortestosterone).
Dika Deca Durabolin, Tren enweghi atomatu carbon na ya 19th. Otú ọ dị, oghere pụrụ iche nke ụlọ ahụ nwere njikọ carbon abụọ ma na 9th na 11th ọnọdụ.
E nwere ụdị Trenbolone atọ maka ire ere, m ga-akọwa otú ha si dị iche. Njikọ aka n'etiti ogige ndị a bụ chemical na setịpụ nke hormonal. Otú ọ dị, ọ bụ njikọ nke onye ester na-agwa ha iche.
Ndị na-edozi ahụ na-eme ka ọrụ Trenbolone na-atọhapụ n'ime ahụ. Ngwurugwu di nfe trenbolone acetate na enanthate ester na-egosi na nke a nwere ogologo ndụ ma na-eme nwayọ karịa nke mbụ. Maka Tren E, enanthate ester dị na 17-beta-hydroxyl nke usoro ya. Trenbolone isi bụ ụdị ọzọ, ọ bụ ezie na enweghi onye ester.
Isi ihe nke Trenbolone enanthate ntụ ntụ bụ n'ime imepụta steroid anabolic. Ọ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na okpukpu ise karịa ike testosterone. N'ụzọ bụ isi, ọ pụtara na ọ bụrụ na ị na-ewere naanị 200mg nke Tren E, mmetụta na nsonaazụ ga-eme ka onye ọrụ ọzọ mebie 1000mg nke testosterone
Anabolic rating 500 100
Androgenic rating 500 100
Ụdị steroid abụọ a dị ka ihe yiri nke ahụ, mana ọdịiche ahụ na-abịa n'ihe gbasara ike na ọsọ ọsọ. Mkpụrụ absorption na excretion nke Tren A bụ ngwa ngwa karịa nke onye ogbo ya, ya mere, obere oge trenbolone acetate ọkara ndụ. Maka nke a, ahụ gị ga - edebanye aha trenbolone dị mma na ọnụọgụ.
Ihe kachasị mkpa nke Tren E bụ na ọ nwere mmetụta dị ole na ole. Ọ bụrụ na ịnweghị ebe dị nro maka ịkpụ awara, mgbe ahụ, nke a bụ ụzọ ị ga-esi gaa. E kwuwerị, usoro ọgwụgwọ ahụ bụ naanị ugboro abụọ n'izu ka Tren Ace chọrọ ịmịnye ọgwụ na intramuscular kwa ụbọchị.
Trenbolone enanthate bụ ezigbo maka ndị na-ahụ maka steroid na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-esiri ọhụụ ike ịnọgide na-enwe ma ọ bụ mee ka ọbara dị elu. Ọ bụ ihe magburu onwe ya maka ndị na-agbapụ.
Gịnị bụ Trenbolone Enanthate ntụ ntụ Jiri N'ihi?
Trenbolone uzuzu bụ ihe bụ isi n'ime mpụta nke ọgwụ trenbolone. Ngwurugwu chemical bụ maka iji ọgwụgwọ.
Tren E bụ ogige na-arụ ọrụ ahụ, na-eme ka ahụ dịkwuo elu, na ime ka arụmọrụ nke bodybuilders ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu. Site na steroid a, ị nwere ike ịmalite ụbụrụ na-enweghị isi na-enweghị isi. Dịka ọ dịkarịa ala, ọ bụ otu n'ime ọgwụ ole na ole ị nwere ike ịdakọ n'oge oge ịcha na nkwụsị.
E wezụga ịbụ onye na-emepụta steroid, Trenbolone E ntụ ntụ bụ ihe dị ịrịba ama ndị na-eme nnyocha na ndị ọkà mmụta ji mee nnyocha na sayensị. Ọ nwere ụfọdụ ihe gbasara ahụike, karịsịa mgbe ị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ, nke nwere ike idozi ọnyà ahụ ike n'etiti ndị agadi.
Olee otú Trenbolone Enanthate Ọrụ?
Na absorption na metabolism nke Trenbolone enanthate ime n'ime imeju. Ọgwụ ọjọọ nwere njikọ dị elu maka sel ndị na-anabata etrogen, bụ ndị na-ahụ maka njirimara nke nwoke abụọ. Ebe ọ bụ na ọ naghị emetụta n'ime estrogen, steroid na-eme ka ọ dịrị uru ahụ.
Ọnụnọ nke Tren E n'ime ahụ na-eme ka uru nke ammonium ude site na mọzụlụ na mmelite ọzọ na njikọ protein. N'agbanyeghị na ị na-arụ ọrụ na ngwongwo muscle, steroid a na-akpali agụụ ma belata ọnụego nke catabolism ma ọ bụ ọnọdụ mgbu na-egbu ahụ. E wezụga ịbanye na AR, onyinye ahụ na-ejikọkwa na mkpụrụ ndụ abụba, ya mere, na-enye lipolysis aka.
Mgbe na akụrụ, Tren anaghị eme ụdị mgbanwe ọ bụla ma gharakwa ịkụda ya. N'ihi nke a, ọgwụ ahụ enweghi mmetụta ọ bụla na usoro ntinye. Nchọpụta bụ site na mmamịrị.
Trenbolone Enanthate Ọkara Life
Nke a trenbolone enanthate nwere ọkara ndụ n'etiti 8 na 12 ụbọchị. N'ịbụ onye na-adị ogologo oge, Trenbolone Enanthate na-eme nke ọma na ahụ ya na ọnụego absorption. Ya mere, ọ na-adị n'ime usoro mmadụ maka ụbọchị ole na ole n'ihu excretion.
Ogologo oge ole ka Trenbolone Enanthate Nọgide Na System Gị?
Ọ bụrụ na ị chọpụta ọkara ndụ nke anabolic steroid, ọ ga-adị mfe ịchọpụta oge ole ọgwụ a ga-adị n'ime usoro. A maara oge a dị ka oge nchọpụta.
Mgbe ị na-eme ule steroid, Trenbolone Enanthate ga-egosi ọnwa ise mgbe ịpụsịrị n'ọgba ọsọ. Ihe kpatara ya bụ na metabolism na-eme n'egbughị oge. E wezụga nke ahụ, eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ a nwere ester dị ogologo ma bụrụ injectable na-etinye aka na igbu oge na ọbara.
Ọ bụrụ na ịnwere ule urine mgbe ọnwa ise gasịrị, ihe nlele ahụ ga-adị njọ. Otú ọ dị, ị ga-eburu n'uche na ndị ọzọ steroid ị ga-stacking na nkedo usoro ga-emetụta oge nchọpụta oge. Dị ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ndị ịgba egwu egwuregwu banyere iji Trenbolone mee ihe.
Kedu uru nke Trenbolone Enanthate?
Ihe nzuzo nke inweta uru anabolic steroid bụ site n'ịgbaso ntuziaka. Ị ghaghị ịghọta ma tụọ ihe ize ndụ ndị ahụ tupu ịmalite usoro ahụ. Iji nwee obi ụtọ trenbolone enanthate uru, jide n'aka na ị na-arụ ọrụ mgbe nile ma na-enwe nri na-enweghị kaadị calorie.
Nke a bụ ihe ị ga-atụ anya na ọdụ:
Njikọ nke ndị na-edozi ahụ na-adịkarị mgbe ha ruru ogo ahụ. Ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọnụ ọgụgụ ya, otú ahụ ka ị ga-enwekwu ahụ ike. Kedu ihe ọzọ, ndị na-edozi na-echebe ihe ndị dị ugbu a ma na-agbatị usoro mmeghachi ahụ.
-Enweta Ọgwụ Aka
N'ihi ihe dị elu na androgenic nke steroid a, ahụ gị ga-anabataghachi ngwa ngwa nke uru ahụ.
-Mụbaa na Ntachi Obi
Trenbolone boro ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ ọbara uhie, ya mere, na-eme ka ha nwee ike ibufekwu ihe oriri na oxygen. Oke ikuku oxygenation kacha elu.
Ka ị na-ebuli gị arọ ma ọ bụ na-eme ụfọdụ mgbatị siri ike, ị gaghị eyi onwe gị. Ahụ ga-agbanye ume ma kwenye kacha ntachi obi na ume.
-Na-eme ka ike na ịrụ ọrụ
Ná ngwụsị nke izu atọ ruo izu anọ n'ime usoro trenbolone, jide n'aka na ị debanye aha ike. Ihe kpatara ya bụ na ọgwụ ahụ na-eme ka ume gị dịkwuo mma, na-ebelata oge mgbake, ma mee ka ntachi obi dịkwuo mma. Ọ ga-abụrịrị na ndị na-emepụta ihe ga-eme ka ọ baara gị uru.
-Na-eduga na njigide Nitrogen
Nitrogen na-ekwusi ike ma na-akwalite anabolism, ya mere, ịmepụta njikọ protein na akwara. Usoro a bụ maka ọganihu ahụ. E wezụga nke ahụ, dị ka ahụ na-ewere ọnọdụ anabolic, ọgwụ na-egbochi catabolism na akụkụ ndị na-emebi ahụ ike yiri.
Nkịtị anụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 16% nke nitrogen. N'ihi na ọ bụrụhaala na ị nọgide na-aba uru a, ị ga-anọgide na-anabolic.
Trenbolone Enanthate bụ otu n'ime steroid ole na ole anabolic, nke na-adịghị eme ka ọ bụrụ nke estrogen. Ya mere, ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahụ ụdị àgwà nwanyi dị na ya.
Ihe na-eme ka ndị steroid gbanwee n'ime estrogen ji nwayọọ nwayọọ bụ ọnụnọ nke carbon atom na ọnọdụ 19th. Maka oghere 19-nortestosterone, hydrogen na-anọchi carbon carbon.
Na otu ugbo, ị nwere ike ịbịaru 20 pound. N'adịghị ka ọtụtụ ndị steroid nke uru ha na-enweta site na mmiri dị arọ, Tren E na-eme ka uru ahụ na-eto ma n'otu oge ahụ na-ere ọkụ abụba ndị ọzọ.
The steroid na-akpata ihe insulin-dị ka ihe na-akpata-1 (IGF-1). Ngwurugwu protein a na-arụ ọrụ iji weghachite ahụ ma mee ka mkpụrụ ndụ, ọnyá, ngwongwo ahụ, cartilage, na ọkpọ.
Ọ bụrụ na ị nọ na mgbapụ, ihe ikpeazụ ịchọrọ imubanye bụ abụba anụ ahụ. Glucocorticoids na-ebelata ọganihu nke ahụ na-eme ka uru dị arọ. Trenbolone E na-eme ihe site na nkedo na cortisol.
N'ihi mmụba n'ọbara ọbara ọbara uhie, ahụ gị nwere ike ibucha ihe ọ bụla edozi na ị na-eri n'adịghị ka o si mee tupu ị nọ na steroid. Dịkarịa ala, ahụ gị nwere ike ịkọ ọbụna maka milligram nke protein, vitamin, abụba, na carbohydrates ị na-abanye.
Nri arụmọrụ bụ otu n'ime ihe dị ịrịba ama trenbolone enanthate nke na-emepụta ndị ọzọ steroid.
-Obere Anụ Mkpa
Na Tren E, ị ga-eme ka ahụ ike gị ugboro abụọ n'izu. Ọfọn, ozi a bụ ozi ọma nye ụmụ okorobịa na-agba mbọ.
-Nke na-adịghị egbu egbu na imeju
N'ihe ka ukwuu, ụbụrụ anabolic ụrọ bụ nchegbu maka hepatoxicity. N'ịbụ ọgwụ ọjọọ, Trenbolone agaghị ezere imeju imeju n'oge ọgwụcokinetics ya. Ọ bụrụ na ịnwere ụfọdụ nsogbu imeju mgbe ị na-azụ, ị kwesịrị ịta ụta na steroid na-eme ka ị na-eji.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-atụ anya na ị ga-eme njem mgbe ị na-agbaji, ebe a bụ ihe ngosi efu. Trenabol ga-enyere gị aka ịsacha abụba na calorie. Ná nkezi, ịnwere ike ịbịaru 1% nke ụbụrụ gị mgbe oge ahụ gasịrị.
-Na-ebelata oge mgbake
Na Tren E, ị nwere ike ịme mmega ahụ nke ọma ma ka na-enweta ume iji nọgide.
Trenbolone Enanthate okirikiri
A na-ahụkarị Trenbolone okirikiri dịruo izu asatọ, mana ndị ọrụ nwere ike ime 12 izu. Ihe kachasị ịtụnanya nke Trenbolone enanthate bụ na ị nwere ike ịtọ ya na AAS ọzọ. Ị nwere ike ime nkwụsị iji belata mmetụta dị na ya ma mee ka arụ ọrụ nke steroid pụta ìhè.
Jide n'aka na ị na-etinye testosterone n'ime oge na-egbu oge ma na-egbuchasị ihe dịka ọ na-enye aka iji dozie hormone na-ahụ maka testosterone na ahụ n'oge PCT. Maka ndị ọrụ oge dị ogologo, ịmepụta Dianabol ma ọ bụ Anadrol ga-enwe mmetụta dị mma na arụmọrụ gị. Otú ọ dị, jide n'aka na ị ga-ejedebe usoro ọgwụgwọ ndị a na-eme ka ọ bụrụ na ị ka njọ.
Ọ bụrụ na ị na-ebugharị n'ime usoro Tren E, ana m akwado Primobolan, Masteron, na Halotestin. Winstrol, testosterone enanthate ntụ ntụ, Anavar na-ejikwa ụdọ na-akụkọta nke ọma n'ọgba aghara.
Na njedebe nke mpaghara Trenbolone, ị kwesịrị ịrara izu anọ na-esote n'iji ọgwụgwọ (PCT). Ọ bụrụ na ịmeghị nke a, ị ga-eme ka ụbụrụ testosterone belata, mee ka ịda mbà n'obi kwụsị, ma ka njọ, gbanyụọ ngwongwo ahụ niile. Ụfọdụ n'ime ihe mgbakwunye PCT iji tụlee bụ Nolvadex na Clomid.
Nke a bụ ihe atụ nke ọkọlọtọ Trenbolone adanthate okirikiri na mkpa stacking;
izu Trenbolone Enanthate testosterone Enanthate Winstrol
1-7 400mg / izu 750mg / izu -
8-12 400mg / izu 750mg / izu 50mg / Eod (ụbọchị ọ bụla)
izu Trenbolone Enanthate Testosterone Propionate Primobolan
1-10 400mg / izu 200mg / Eod 600mg / izu
Ọganihu Na-ebu Bulking
izu Trenbolone Enanthate testosterone Enanthate Anavar Primobolan
1-10 400mg / izu 1000mg / izu 90mg / izu 600mg / izu
11-12 - 1000mg / izu 90mg / izu -
13-14 - - 90mg / izu -
Ozugbo ị gafechara na Trenbolone adanthate, jide n'aka na ị ga-ewere 50mg nke Clomid kwa ụbọchị. Ị ga-anọgide na-eji dose maka ụbọchị 21 sochirinụ. N'otu oge ahụ, hụ na ịhazi 20 - 40mg nke Nolvadex maka ụbọchị iri.
Trenbolone adanthate dị na ụdị injectable. Onu ogugu nke Trenbolone di n'etiti 75mg na 100mg, nke ị ga-eji okpukpu abụọ kwa izu site na ọgwụ mgbochi ma ọ bụ apata ụkwụ. Nzuzo a pụtara na dosing weekly dara na 150mg na 200mg.
Maka ndi ozo, i nwere ike ime n'agbata 200 - 400mg / izu n'agbanyeghi ma ihe mgbaru ọsọ gi bu igbutu, njo, ma obu inweta ike.
Ọ bụ ezie na 75 - 100mg ga-arụ ọrụ anwansi, ndị ọkachamara nwere ike iwere dị ka 400mg n'otu mkpụrụ. Ọ bụrụ na usoro ọgwụgwọ gị karịa uru a, nsụgharị tantbolone enanthate ga-esi na ụwa a pụta. Otú ọ dị, na njedebe nke ya nile, ị ga - enwe nsogbu ndị ọzọ.
Tren E ntụ adịghị mma maka iji ya na ndị inyom. Ihe kpatara ya bụ na ọgwụ a na-ekpughe ihe dị ukwuu na-emepụta etrogenic, bụ nke nwere ike ọ gaghị abụ na augur ọma na nha anya nke nwanyi. Were, dịka ọmụmaatụ; enweghi ike ime ihe na ihe iriba ama di ka clitoris elongated.
Ọgwụ a nwere ike maka ndị mbido na ndị ọrụ steroid. N'ịbụ ụbụrụ ugboro ise karịa testosterone, Trenbolone bụ ezigbo maka ike-isi bodybuilders. Ọ bụrụ na ị na-amalite, ị ga-enyocha maka ụgwọ ndị ọzọ Aasraw trenbolone acetate ntụ ntụ suppliers.
Mmetụta dị iche iche nke steroids bodybuilding dabeere na ihe ole na ole. Dịka ọmụmaatụ, nke dị elu karịa usoro ahụ, otú ahụ ka ọ dịkwuo n'ahụ gị. E wezụga nke ahụ, ndị mmadụ dị iche. Otu anụ mmadụ nwere ike ịbụ nsị ọzọ, ị maara.
Na-agwụ ụfụ ma na-emeghasị ihe eji ehi ụra
Mee ka ọbara mgbali elu
Nnukwu ịkpọasị n'abalị
Obere ọkwa nke testosterone
Ọganihu ụbụrụ (hyperplasia prostatic benign)
Cholesterol dị iche iche
Ọdịdị dị njọ nke ntutu isi
Mmetụta nke gynecomastia n'ihi prolactin
Otu esi zere Trenbolone Enanthate Side Effects
Ụfọdụ n'ime utịp ahụ trenbolone dị n'elu bụ nnọọ ihe a na-ahụ anya. Were, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ ndụ na-ahụkarị na androgenic dịka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ nke nwoke, ị kwesịrị ịkwụsị ịnya steroid.
Mgbe ị na-enweta ọsụsọ siri ike, hụ na ị ga-aṅụ ọtụtụ mmiri iji mee ka ị dị ọcha. Ná ngwụsị nke usoro ịgba ọsọ, jide n'aka na ị nwere PCT ịkụ ịmalite ịmalite ụbụrụ testosterone.
N'okwu ozo-ebe obibi, testosterone kwesịrị ịbụ akụkụ na nchịkọta gị. Ihe kpatara ya bụ na Trenbolone kwa otu ga-akwụsị ịkwụsị mmepụta nke testosterone.
Ebee ka m nwere ike ịzụta steroid maka bodybuilding?
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịjụ ajụjụ mbụ gị, "Ebee ka m nwere ike ịzụta steroid maka ozu ahụ mgbe ha na-akwadoghị iwu?"
Were ume miri emi ma gụọ n'ihu n'ihi na anyị agbaji ilu ahụ.
-Ịzụta Trenbolone Enanthate
N'ọtụtụ ọnọdụ, Trenbolone maka ire ere na ihe ndị na-emepụta ya bụ iwu na-akwadoghị. Nmepụta na ịzụta nke steroid anaghịzi adị maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na ọgwụgwọ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ụfọdụ maka usoro steroid gị, ị ghaghị iji ya mee ihe oji ojii.
Dịka ọmụmaatụ, na United States, FDA eburu nkwụnye ahụ na mmepụta, iji, na inwe ikikere. Site na njedebe a, ị nwere ike ikwubi na ọ dịghị ụlọ ọrụ ọgwụ na United States nwere nkwado FDA maka ịmepụta steroid. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnwere ịbịaru iwu, jide n'aka na ị bụ ezi onye na-agwọ ọrịa ma ọ bụ onye sayensị.
Ọ bụ ezie na Tren E bụ iwu na-akwadoghị na United States, UK, Australia, na Canada, ọtụtụ mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa na Africa anaghị etinye aka na ịchịkwa ojiji ya. Na Kanada, ọ bụ ọgwụ eji eme ihe n'oge IV n'okpuru Ụkpụrụ Omume Controlled. Ị nwere ike iri uru nke ohere ma chọọ trenbolone acetate ntụ ntụ suppliers dị ka www.aasraw.com.
N'adịghị ka ndị ọzọ dị iche iche trenbolone ndị ọzọ, Tren E bụ ihe siri ike ịchọta. Otú ọ dị, ịnwere ike ịhọrọ maka ụlọ ọrụ ịntanetị ma ọ bụ mee ka steroid si n'aka onye na-eme egwuregwu mgbatị. Kedu ụzọ ọ bụla, jide n'aka na ị nwalee ihe ha mere ka ị ghara ịdaba na ngwaahịa ndị aghụghọ na ndị na-enweghị atụ.
-Trenbolone Enanthate Ahịa
Trenbolone enanthate price dabeere na ọtụtụ ihe. Dị ka ọmụmaatụ, ịzụta si n'aka onye na-ahụ maka mgbatị ahụ nwere ike ịdị oké ọnụ karịa ịzụta ozugbo site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. E wezụga nke ahụ, onye ọ bụla na-emepụta ihe nwere ọnụahịa ego ha.
N'ime nkezi, igbe 10ml nke Tren E na-akwụ ụgwọ n'etiti $ 75 na $ 130 maka nsonye 200mg.
-Zụrụ Tren E Online
Ndị na-ere ọgwụ maka ire ere siri ike ịbịa, n'ihi iwu siri ike FDA. Ọ bụrụ na ị bụ novice na ha bodybuilding hacks, ị ga-atụkwasị obi niile na labs labs na-azọrọ na-emepụta elu-ọkwa Tren. Ịchọghị itinye ndụ gị n'ihe ize ndụ na-eche na ụfọdụ na-emepụta ogige ha na njikwa akara efu na enweghị ụkpụrụ.
Ajụjụ ọzọ dị n'uche gị kwesịrị ịbụ, "Ebee ka m nwere ike ịzụta steroid maka bodybuilding?" Ọfọn, m ga-akọwa. Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị mfe n'ihi na ọ na-azọpụta oge gị na ego gị.
Jide n'aka iji trenbolone enanthate na-ere n'etiti ndị dị iche iche na-ere ákwà, lelee njirimara nke ndị ahịa ahụ, na mbupu mgbanwe. E wezụga nke ahụ, ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị inye otu mpempe akwụkwọ zuru ezu banyere Tren E. Nke a na-agụnye uru, mmetụta trenbolone, ụbụrụ, na otu esi ejikwa mmetụta ndị dị na ya.
Trenbolone Enanthate Nri Ntụziaka
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịzụta ngwaahịa dị njikere, ị nwere ike ịzụta raw Tren E ntụ na-abịa na nchịkọta ị chọrọ. Usoro a abụghị naanị ọnụ ọnụ kamakwa ụzọ kachasị mma nke ịhazi Trenbolone enanthate dosage.
Trenbolone enanthate uzommeputa:
Maka 100ml na 100mg / ml, ị ga - achọ;
10G (7.5ml) nke Trenbolone E ntụ
10ml nke Benzyl Benzoate (10%)
2ml nke mmanya benzyl (2%)
80.5ml nke grapeseed, sesame, ma ọ bụ mmanụ aki oyibo
Maka 100ml na 200mg / ml, ịchọrọ;
20G (15ml) nke Trenbolone E ntụ
15ml nke Benzyl Benzoate (15%)
68ml mmanụ (sesame, grapeseed, ma ọ bụ mmanụ aki oyibo)
Trenbolone Enanthate so n'ime ndị dị ike ole na ole anabolic steroid maka ire ere n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Eziokwu ahụ bụ na ọ dị okpukpu ise karịa ike testosterone pụtara na ọgwụ ahụ bụ ebe na-adịghị aga-aga na nwanyị. Dị ka o kwesịrị, naanị buru ya ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ steroid nwere ahụmahụ.
N'iburu n'uche na o nwere ogologo ọkara ndụ, jide n'aka na iji ya mgbe ị na-aga ogologo oge. Ihe kasịnụ bụ na ị nwere ike iji ya na ihe ọ bụla steroid steeti iji nweta ihe mgbaru ọsọ dị iche iche. Ị chọrọ inweta ike, bulie elu, ma ọ bụ belata gị; Tren E ga-eme.
Ị na-eche ihe kpatara Trenbolone E ntụ ntụ ji dị ka "steroid" anabolic "siri ike"? Ọfọn, ọ bụ n'ihi na onyinye ahụ nwere ọkara ọkara ndụ ma na-anọgide na usoro nke ogologo oge tupu mkpochapu. Ọbụna mgbe ụfọdụ nsogbu na-ebili, onye ọrụ ahụ ga-akwụsị ọgwụ ahụ, ma mmetụta ga-adịgide ruo izu abụọ na-esote.
William Llewellyn, Nri oriri na ala, Anabolics, Peeji nke 491 - 499, 618, 724, 2011.
Kickman, AT, Pharmacology of Anabolic Steroids, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018.
Wilson, VS, Lambright, C., Ostby, J., Grey Jr, LE, Na Vitro na na Vivo Effects nke 17beta-Trenbolone: ​​a Feedlot Effluent Contaminant, Toxicological Sciences, 2002.
Yarrow, JF, McCoy, SC, Borst, SE, Ụdị Nhọrọ na Nlekọta Ọgwụgwụ Ngwa nke Trenbolone: ​​Ụbụrụ Anabolic nwere ike na Androgenic na Ọrụ Estrogenic, PublishMed Publications, Online, 2010.
Ojasoo, Raynaud., Ndị Na-ahụ Maka Ọgwụ Na-ahụ Maka Ụkpụrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ Na-ahụ Maka Nchọpụta, Research Research, 1978.
Raw Isotretinoin (Accutane) maka ihe otutu: Na-emeso ihe otutu na Isotretinoin Methasterone Steroid nke kachasị ike (Superdrol) Prohormone
AC 262356 ntụ ntụ
Estradiol ntụ ntụ
Rimonabant ntụ ntụ
Copyright © 2019 aasraw Ikike niile echekwara. Ezubere ya www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com